Nadiifiye Vacuum Qoojiye, Neefta Hawada - Jinqiu
Alaabteenu sifiican ayey u soo dhoweeyeen macaamiisheenu tayada sare, qiimaha tartanka iyo qaababka ugu wanaagsan.
Shijiazhuang Jinqiu Trading Co., Ltd. waa shirkad xirfadlayaal u ah mashiinka nadiifinta, qalabka nadiifinta iyo nidaamka dayactirka dhagxaanta. Waxaan ku siin karnaa xoqe, burjiye, nadiifiye, nadiifinta rooga, mashiinka wax lagu buufiyo, gawaarida gawaarida, gawaarida, daryeelka marble iyo granite, nadiifinta, hagaajinta iyo alaabada nadiifinta.
Macaamiil badan ayaa soo bandhiga nidaamyo cusub oo nadaafadeed oo loogu talagalay suuqa maxaliga ah ee dalal kala duwan, macaamiisha kala duwan waxaan ku siin karnaa xalal taxane ah sida loogu baahan yahay. Ilaa hadda waxaan u dhoofinaa mashiinka nadiifinta iyo qalabka nadiifinta Koonfur-bari Aasiya iyo Yurub in ka badan 10years.
Shijiazhuang Jinqiu ganacsiga wuxuu sii wadi doonaa inuu la-hawlgalayaasheena siiyo tikniyoolajiyad casri ah oo qanciya badeecooyinka, si nolosheenna looga dhigo mid fudud oo hufan.
Waxaan kalsooni ku qabnaa inaan la wadaageyno natiijooyinka labada dhinac isla markaana aan la dhisi doonno xiriir iskaashi adag saaxiibbadeenna ku dhex jira suuqan.
Shiinaha alaab-qeybiyaha tayo sare leh oo saraysa
Dhagax midabkiisu fudud yahay iyo dhagax miridhku dhammaantood waa granites oo qaab dhismeedka lamellar ah. Marka lagu daro nuugista biyaha caadiga ah ee granite, sababta oo ah midabka cad ee fudud, waxaa jiri doona meel biyo ah ama wasakheyn ah, raadadka biyuhuna ma sahlana in la waayo. In ...
Maaddaama sagxadaha xarumaha laga dukaamaysto iyo saldhigyadu ay u badan yihiin marmar ama dhoobada dhoobada, noocyada dabaqyada noocan ahi waxay leeyihiin baahiyo aad u sarreeya oo xagga nadaafadda ah, ka dib, waxay matalaan sawirka goob dadweyne. Sidaa darteed, shaqada nadaafadda waa in si taxaddar leh loo sameeyaa. Tartiib tartiib, ...
Shaybaarada kiimikada ee Qaranka sidaan u naqaanay NCL, laga soo bilaabo bilowgii bilowgii dabayaaqadii 1940-yadii oo samaynta saabuun iyo shaamboo loogu talagalay ganacsiga qolka qurxinta ee qoyska, ilaa doorka hogaaminta maanta ee warshadaha dayactirka fayadhowrka oo ah shirkad caalami ah oo caalami ah. NCL isagu waa ...
Badeecad kastaa si taxaddar leh ayaa loo sameeyaa, waxay kaa dhigi doontaa mid ku qanacsan.